5 Cunsurood Markaad Xulaneyso Codkaaga Kibir ahaanta Saameynta Ugu Badan | Martech Zone
5 Cunsuriye Markaad Xulaneyso Codkaaga Kartida Awoodda Saameynta Ugu Badan
Sabtida, Juun 23, 2018 Douglas Karr
Waxaan la dhisnay xiriiro aad u wanaagsan dhowr hibood oo xagga codka ah sanadihii la soo dhaafay. Amanda Fellows waa mid ka mid ah hibadayada goto, iyo sidoo kale Paul iyo Joyce Poteet. Hadday ahayd fiidiyow sharrax buuxa leh ama hordhac podcast ah, waxaan ognahay in helitaanka codka saxda ah ee ka sarreeya tayada ay saameyn aan caadi ahayn ku yeelatay tayada wax soo saarkeenna.
Paul, tusaale ahaan, wuxuu lamid yahay magaalada Indianapolis. Waxa uu ka maqnaa raadiyaha, telefishanka, waxaana uu ahaa codka dhowr nooc oo waaweyn oo gobolka ah. Sababtoo ah codkiisu waa mid gaar ah oo la garan karo, waxaan isku dayeynaa inaan ugu adeegsanno sida ugu badan ee aan kari karno shaqada ku saleysan Indianapolis. Isagu sidoo kale si cajiib ah ayuu u dhameystiran yahay, badiyaa wuxuu duubaa dhowr qaab oo kala duwan oo aan kala dooran karno. Xusuusin dhinac ah - sidoo kale isagu waa mid keliya oo faraxsan, oo qosol badan!
Voices.com waxay soo saartaa cod sanadle ah oo ku saabsan warbixinta isbeddellada iyada oo ay talo ka helayaan in ka badan 1,000 xirfadlayaal hal abuur leh oo caalami ah, oo ay ku jiraan soosaarayaasha, nashqadeeyayaasha waxbarista, filim sameeyayaasha, tusaha ganacsiga, xayeysiisyada xayeysiinta, iyo xirfadlayaasha suuqgeynta. Waxay sii daayeen sawir-gacmeedkan oo bixiya falanqeyn ku saabsan qaababka codka, lahjadaha, luqadaha, iyo xitaa suuqyada da'da.
Qaar ka mid ah natiijooyinka muhiimka ah ee Codka Suuqgeynta:
Degan codadku waa muhiim in lala macaamilo suuq; taas awgeed, baahida loo qabo lahjadaha ayaa sii kordhaya.
International dalabku wuu sii kordhayaa, iyadoo codsiyada aan Ingiriisiga ahayn ay sii kordhayaan 60% laga bilaabo 2016 illaa 2017 iyadoo suuqa adduunku uu sii ballaaranayo.
Millennial iyo Senior kororka suuqa ayaa saameyn ku yeeshay da'da codka marka loo eego kartida sida suuqleyda iyo xayeysiiyayaashu u codsadaan karti taas la mid ah da'da ay bartilmaameedsanayaan.
Markaad eegto inaad kobciso dadaalka suuqgeynta iyo xayeysiinta ee codka karti u leh, maskaxda ku hay in codadka dabiiciga ah ay wali si qoto dheer ula macaamilayaan macaamiisha marka loo eego codadka synthetic iyo baahida loo qabo codadka dumarka ayaa ka koraya si ka dhaqso badan ragga. Markaad eegto inaad tuurto dadaalkaaga suuqgeynta ama xayeysiinta xigta, maskaxda ku hay arrimahan:
Codkaaga karti-xirfadeedka waa inuu hubiyaa xiriir shucuur leh oo lala yeesho dhagaystayaashaada.
Codkaaga karti-xirfadeedka waa inuu u dhigmaa noocaaga.
Codkaaga karti-xirfadeedka waa inuu la mid noqdaa bartilmaameedkaaga dhagaystayaasha.
Codkaaga karti hibada waa inuu lahaadaa shaqsiyad.
Codkaaga kor ku xusan waa inuu u dhawaaqaa hamiga suuqa bartilmaameedka.
Tags: asxaabta amandasida looguntin ደስታpaul poteetcodkacod korcodka shubaycodadka.com